Barnaamijka Dib u Eegista Bukaanka iyo Isuduwidda - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Bixiyaha > Adeegyada Caafimaadka Xubinta > Barnaamijka Dib u Eegista Bukaanka iyo Isuduwaha
Barnaamijka PRC wuxuu caawiyaa isku dubaridka daryeelka xubnaha u baahan.
Hubinta Adeegsiga Badbaadada ah
Marka dib u eegis caafimaad lagu sameeyo xubin ayaa laga yaabaa in lagu meeleeyo barnaamijkayaga Dib-u-eegista Bukaanka iyo Isuduwidda (PRC) si ay si fiican isugu dubarido daryeelkooda loona hubiyo in dhammaan adeegyada si habboon looga faa'iideysto.
Xubin ayaa lagu meeleyn karaa barnaamijka PRC sababahan awgood:
Ka helitaanka daryeel dhakhaatiir dhowr ah oo kala duwan
Haysashada tiro aad u tiro badan oo isla dawooyin ah
Adeegsiga farmasiyada kala duwan
Isticmaalka qolka xaaladaha degdega ah
Daryeelka lama isku duwo
Xubnaha loo xushay PRC waa inay doortaan hal bixiye daryeel aasaasi ah, farmashiye, iyo isbitaal. Haddii xubintu dooran weydo bixiye, annaga mid baan u dooranaynaa iyaga. Xubnaha ku jira PRC waa inay u tagaan bixiyeyaashan oo keliya. Haddii xubin ka tirsan PRC ay u tagto bixiye kasta oo kale iyadoon loo gudbin, xubinta waa inay bixisaa adeegga.
Mid ka mid ah bixiyeyaasha daryeelka aasaasiga ah wuxuu hubiyaa in daryeelka caafimaad iyo rijeetooyinka la iskula soo duwo caafimaadka iyo amniga xubinta. PRC ayaa tan suurto galineysa. Xubnuhu waxay ku sii jiraan barnaamijka PRC ugu yaraan laba sano sida uu go'aamiyo sharciga gobolka (WAC) 182-501-0135.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Julaay 10, 2020